Ejiri KIPTAS Silivri 3rd Lottery Lọtrị | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKIPTAS Silivri 3rd Stage Lot Drawing
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
kaptas silivri ogbo ịse mere
N’okwu ya na Nzukọ KIPT Silivri 3rd Stage Kura Lottery, İBB Onye isi ala Ekrem İmamoğlu kpọrọ oku na-esote Onye isi ala Ali Kurt: “will ga-anapụta ụfọdụ ụlọ anyị dọtara. Anyị, ụmụ amaala obodo anyị si ebe ahụ na ndị ikwu ha, na-eburu n'uche na ụgwọ a kacha nta na Turkey enweghị ike ịrọ nrọ maka ndị anyị na-akpata ego na opekata mpe, echiche ọrụ ngo nwere ike ibata ego na ụlọ, M Silivri 4 Project mara ọkwa. Ka anyị kọọ taa, ma nyefee ezinụlọ ha ozi ọma. Izu na-esote; Ka anyi nye ndi mmadu anyi, ndi obodo anyi nwere olile anya ‘N’agbanyeghi onodu ndi a, enwere ike inweta ohere’. Nke a bụ ọrụ dịịrị anyị. Anyị nwere olile anya na anyị ga-ezisara ndị Istanbul ozi a n'izu na-abịa site na KIPTAS. ”
Onye isi obodo Metropolitan (IMM) Onye isi ala Ekrem Imamoglu gara nzukọ KIPTAS Silivri 3rd St Lot Lottery Ceremony. BBoğlu Secretary General İBB Yavuz Erkut, İBB Onye Ndụmọdụ Na-ahụ Maka na SözcüSü Murat Ongun, Onye isi oche KİPTAŞ Ertan Yıldız na KŞPTAŞ General Manager Ali Kurt so. Kurt kwuru okwu obodo ahụ tupu ememme ahụ.
IWU: “DPLỌMỌTA N'AKA EGO NA-EKWU NKP FROMTA N'ANYA”
O kwusiri ike na ha enweela ọganihu dị ukwuu na obere oge na Silivri 3rd Stage project project social one is one of them. Kurt kesara ozi banyere oru a wee sị:
Ndi oru ngo a nke mejuputara 1513, ulo ahia 7, ulo uka 300, ndi mmadu ato, 1 ulo akwukwo, 26 ulo akwukwo na ulo akwukwo nke 4. N’ọnwa Ọgọstụ 1, anyị abụọ nwere ọganihu n’azọ 3-3 pasent, ebe otu n’ime ngalaba anyị nọ n’azụ azụmaahịa azụmaahịa na pasent 2019. Dịka otu, anyị wetara ọkwa a n'ọkwa nke ọzọ dị ka usoro azụmaahịa anyị zụlitere n'usoro iwu. Mgbe anyị buru ụzọ kwurịtara banyere ọrụ ahụ, anyị chọpụtara na akwụkwọ ikike na ntinye ọrụ ahụ dị iche na ibe ha. A kagbuola atụmatụ zoonu. Anyị malitere usoro iji kwadebe atụmatụ mmepe ngwa ngwa. Mgbe anyị jisịrị nkwado nke atụmatụ a, anyị nwetara mgbanwe mmegharị ikike dị na ọrụ anyị dị ugbu a wee mezue azụmahịa dị mfe nke ala anyị dị ka ekeresimesi. ”
IWU: “EGO NA-EBURU OBI 2BỌR XNUMX XNUMX”
N’igosipụta na ha na-eme atụmatụ ịgba egbe na Eurasia Show Center na Yenikapı ọnwa abụọ gara aga, Kurt kwuru na ha enweghị ike mejupụta arịrịọ ndị a n'ihi ọrịa ọjọọ. Kurt kwuru na ha gara na nhazi nke ndị ga - erite uru ga - enwe nsogbu na usoro a. "Anyị debere oge ịkwụ ụgwọ Eprel-May maka ọnwa abụọ. N'oge dị mkpirikpi n'ime ọnwa Mee, anyị mere ndokwa ịkwụ ụgwọ ụgwọ anọ nha anọ. Ebumnuche anyị n’ime ngwa a bụ ime ka nsogbu dịịrị ụmụ amaala anyị belata, ma ha na-akwụ ụgwọ ụlọ na obere ụgwọ. Anyị na-ebuli onwe anyị elu dị ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mbụ nke na-amalitekwa na ngwa usoro a na Turkey, "o kwuru.
İMAMOĞLU: “ANYA KA ANY PR BARA EGO
Onye isi ala İBBoğlu İmamoğlu kwuru, "N'oge a siri ike na gburugburu nsogbu, KIPTAS niile egosipụtara nlezianya ịkwadebe oru ngo nke nwere nsogbu ụfọdụ tupu, ime ka ọ dịrị ndị jidere ya n'ụzọ kachasị ruo eru, na-ejigide ogo ya n'ọkwa kachasị elu. Eji m obi m niile na-ekele ndị ọrụ, Onye njikwa, Onye isi oche, ndị ọrụ niile na ndị ọrụ niile nọ na ngalaba. Mgbe m gara n'ubi ahụ, ejiri m anya m jiri anya m abụọ na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị maka usoro ọrịa na-ekpughekwa ogo mmepụta nke ndị na-erite uru chọrọ. Obi dị m ụtọ ”.
N'ikwu na ya na-agbaso ọrụ ahụ site na mbido, Imamoğlu kwuru, “offọdụ ọchịchọ na ihe ndị anyị chọrọ dịkwa na atụmatụ m. Ọ bụ isi ihe bara uru na ọnọdụ ya. O nwere njirimara iji bie usoro dị iche na Silivri. Onwere ihe gha enye ndi mmadu nsogbu. N’akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ịkwa emo, enwere ubi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n’akụkụ ya, o nwere usoro n’ihu anyị nke a na-emeghị ma ọlị, mana amalitebeghị ma ọlị. Enwere ebe ntụrụndụ ebe a, ọ bụ ọrụ na ọrụ dịịrị IMM iji mee ka ebe ahụ ka mma wee jupụta n'ụdị ogige a ma ama nke Istanbul ”.
“ANY HAVE nwere ikike ịdabere n'obodo mara mma”
N’imesi ike na isi echiche nke KİPTAŞ bu imeputa ulo ndi mmadu, İmamoğlu gosiputara n’inye mgbakwunye nke ihe nlere ka mmepe obodo bu otu ebumnuche di nkpa. N'ịkọwapụta na ọ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ steeti nwere ụdị ọrụ a na ọrụ dị mkpa, İmamoğlu kwuru, "N'akụkụ a, KİPTAŞ kwesịrị ịbụ ihe atụ nye mpaghara ma ọ bụ mpaghara ebe ngwaahịa ọ bụla na-emepụta, ya na ụdị ya na ije ya. O nwere ụdị ozi a. Na ozi ozo, otodi, echiche nke ulo obibi nke ndi mmadu, ndi mmadu nwere ohere inweta ulo na ego ha na enweta na onodu ulo ha na Turkey iwu nke ego n’inye ya ikike, inye ya ikike ime ka ndi mmadu mara ma nyekwa ulo inweta ulo ga - amata nro ya. Principleskpụrụ ndị a dị mkpa maka nkà ihe ọmụma KIPTAS. N’ezie, usoro nke imepụta ihe nlere maka mgbanwe n’ime obodo bụ ihe ọzọ. "Ọ ga-enwerịrị ike imepụta otu atụmatụ na-edozi ahụ na ikike ị mepụta oru nwere ike inye aka na mgbanwe na mmeghari obodo na Istanbul n'ụzọ zuru oke."
“ANYILL GA-EKWU OZI ỌMA”
İmamoğlu kwuru na ụwa dum ga-abanye na ahụike, ndụ mmekọrịta na usoro nsogbu akụ na ụba n'ihi usoro ọrịa ahụ, ma kwusie ike na ha na-eji mmụọ nke mkpokọta n'echiche a. İmamoğlu rụtụrụ aka na a ga-emeri ụbọchị ndị a site na ịmalite gburugburu nke ịdị n'otu, nkwekọrịta na ntụkwasị obi, wee gaa n'ihu dị ka ndị a:
“Usoro a ga-akwụsị, ndụ ga-aga n'ihu. Mana ụlọ ọrụ dị ka anyị nwere ọrụ iji kwado ezigbo ọrụ ndị ọrụ. N’agbanyeghi ihe isi ike ndi a, ike anyi n’icheputa oru; N'agbanyeghị ihe isi ike ndị a, ịmepụta ọrụ; N'agbanyeghị ihe isi ike ndị a, anyị nwere ọrụ igosipụta ikike ịkacha akasi obi ndị ọrụ anyị. N'agbanyeghị ihe isi ike ndị a niile, anyị ga-aga n'okporo ụzọ anyị site n'imeziwanye ọnọdụ ndị ọrụ anyị. Anyị ga -emepụta ohere ọrụ ọhụụ na anyị ga-abụ olile anya nke ụfọdụ ngalaba na usoro ịsụ ụzọ anyị ga-aga n'ihu. ”
“EKPATARA EGO EGO
N'ịgbaso okwu ndị a, İmamoğlu mechiri okwu ya site n'ịkpọ oku a ka Kurt, onye isi njikwa KIPTAS:
You ga-anapụta ụfọdụ ụlọ anyị na-adọta na June. Anyị, ụmụ amaala obodo anyị si ebe ahụ na ndị ikwu ha, na-eburu n'uche na ụgwọ a kacha nta na Turkey enweghị ike ịrọ nrọ maka ndị anyị na-akpata ego na nke kacha nta, echiche ọrụ ngo nwere ike ị nweta ego na ụlọ, M Silivri 4 Project mara ọkwa. Thesebọchị ndị a, anyị na ụkpụrụ omume na akụ na ụba na-alụ ọgụ ụbọchị ndị a; Ka anyị nwee ihe ịga nke ọma ịbụ olileanya maka ndị mmadụ site na imepụta ụzọ ziri ezi, usoro ziri ezi, ezigbo usoro, na ịmịpụta ezigbo ọrụ na ọrụ ruru eru. Ka anyị kọọ taa, ka anyị zie ndị ezinụlọ ha ozi ọma nke Eid. Ka anyi nye ndi mmadu anyi, ndi obodo anyi, n’olileanya nke ‘O ga - ekwe omume inweta ohere obuna n’okpuru onodu ndia’ n’izu ozo. Nke a bụ ọrụ dịịrị anyị. N’olile anya, anyi gha ezi ozi oma anyi n’obodo Istanbul n’izu ozo site na KIPTAS. Ndị enyi anyị ga-akwadebe maka nke a. ”
N'ihu mkpuru okwu ndi iri abuo na ato no na Bakırköy, a malitere otutu nza. Imamoglu, Erkut, Ongun, Yildiz na Kurt ekpebiela aha ndị mbụ na ụlọ ọrụ ha meriri na Silivri 23rd Stage project na eserese ha.
Ihe osise Lottery nke Kiptaş Silivri 3rd Stage Social Housing echi
Kadir Topbaş: Metrobus ga-agbakwasị Silivri, obodo Silivri ga-abịa!
Nzọụkwụ site na iji nọmba Kabataş-Mahmutbey metro line
Ụzọ Trabzon Light Line Line Line
Ationgbọ njem nke Hamitler na Bursa na-abanye na ọkwa ọkwa.
A na-atụle Atụmatụ Ebumnuche E-5 na Silivri
Mayor Topbaş kwere nkwa iji ụgbọ okporo ígwè gaa Silivri
Istanbul Metro ga-aga Silivri
Oziọma nke metrobus na akara Büyükçekmece-Silivri
Mayor Topbaş na-akpọ Silivri Metro Project
Metrobus agbatịkwuru Silivri
Büyükçekmece-Silivri Metro Line KİPTAŞa Victim Went
Bipụtara Nkọwa na 'Ọnọdụ nke imeghe maka Istanbul'
TCDD 356 maka inweta ndị ọrụ
Antalya 3. Ule Ule na Usoro Ugbo Ala
Bahçeşehir-Ambarlı na Bahçeşehir-Silivri
3 na Antalya. Uwe Mgba Mgba Mkpụrụ na Nweta System Line